बेजिङस्टोकमा एनआरएन भवन युकेको पहिलो च्यारिटी
बिजय लिङथेप -
लन्डन । एनआरएन भवन निर्माणको निमित्त पहिलो च्यारिटी कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ ।
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यतामा गत १ जुलाई शनिबार बेजिङस्टोक स्थत अल्ड्वोर्ड साइन्स कलेजमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । पहिलो चरणको औपचारिक कार्यक्रम प्रमुख अथिति डा. सुवेदी, एनआरएन अध्यक्ष मुक्षेत्र गुरुङ र बीएनसीका अध्यक्ष तीलबिक्रम सोम्बाहाम्फेले संयुक्त रुपमा दीप प्रज्ज्वलन गरेपश्चात् नेपाली राष्ट्रिय गीतबाट सुरुआत भएको थियो ।
कार्यक्रम सञ्चालन समाजकी सचिव निशा शर्माले गरेकी थिइन् भने सुरक्षासम्बन्धी जानकारी सहसचिव धु्रव गुरुङले दिए । स्वागत मन्तव्य वरिष्ट उपाध्यक्ष साथै कार्यक्रम संयोजक ओम गुरुङले राखे । एनआरएनका उपाध्यक्ष योगकुमार फगामीले च्यारिटी कार्यक्रमको उद्देश्यबारे र समाजले गरेको गतिविधि श्रव्य, दृश्य (स्लाईट शो)को माध्यमद्वारा प्रस्ट्याएका थिए । कार्यक्रममा महिला संयोजक सुशीला राई र गोर्खा च्यानलका विमला सेनेको पनि उपस्थिति थियो ।
त्यस्तै गरी महामहिम राजदूत डा. सुवेदीको सन्देशमुलुक वक्तव्यले सबैको ध्यानाकर्षण गराएका थिए भने एनआरएन अध्यक्ष गुरुङ र महासचिव लिङ्गदेनले पनि आ–आफ्नो धारणा राखे । बीएनसी अध्यक्ष सोम्बाहाम्फेबाट कार्यक्रम सफल बनाउन कार्यसमितिका पदाधिकारीलगायत प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहयोगी सदस्यहरुप्रति धन्यवादका साथ आभार व्यक्त गर्दै औपचारिक कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो ।
दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन विजय लिङ्गथेप र शर्मिला पुनले सम्हालेका थिए । नेपालबाट आएका गायिका विष्णु चेम्जोङ्ग र गायक गगन पुनको साथमा स्थानीय कलाकारहरुमा प्रियदर्शी लिङ्गथेपको एकल नृत्य, दिलीप लिम्बूको गायन, इशा गुरुङ इङ्लिस गायन, शर्मिला पुन, रोशनी पुन, मेनुका पुन, सायरा पुनको कौडा नाच, निश्चल गुरुङको रिमिक्स नृत्य, मिरा फगामी, सुवर्ण फगामी, वर्षा गर्बुजाको नृत्य, सेसिल पुन एलिशा पुन, प्रशान्त पुन, सायरा पुन गोर्खा पल्टन र इशा गुरुङ, अनिशा गुरुङ र मेलिषा गुरुङको प्रस्तुतिमा सबैबाट वान्समोर पाएका थिए । त्यस्तै गायिका विष्णु चेम्जोङ्ग सुरिलो गायनले सबैलाई नाच्न बाध्य बनाएका थिए भने अन्तमा गायक गगन पुनको गायनले सांगेतिक माहोलका साथ सबैलाई छमछम नचाएका थिए ।
साँझ ५ बजेदेखि सुरु भएको कार्यक्रम मध्यरातसम्म चलेको थियो ।